Afisy vaovao an'ny Oppo F11 Pro dia manambara ny sensor 48 MP izay entiny | Androidsis
Afisy vaovao an'ny Oppo F11 Pro dia manambara ny sensor 48 MP entiny
Oppo dia nizara afisy fitsapana ho an'ireo efa nandrasana hatry ny ela Oppo R11 Pro Ao amin'ny twitter. Ny teaser, izay miseho aorian'ny East, misy ifandraisany amin'ny fahakingan'ny fakan-tsarin'ny fitaovana ary manamafy ny fisian'ny sensor 48 MP eo an-damosiny, azo inoana.
Ny teaser dia tsy namaritra raha ho eo aloha na any aoriana ilay sensor lehibe, fa misy fivoahana mialoha kokoa manome torohevitra ny fitaovana hamehezana fakantsary selfie pop-up 32 MP. A) Eny, Fakan-tsary 48 MP no ho mpitazona sensor voalohany amin'ny fananganana fakan-tsary aoriana.
Mampiroborobo ny finday avo lenta miaraka amin'ny diezy "#BrilliantPortrait" ilay teaser; raha ny fahitana azy, momba ny fakantsary mahery vaika matanjaka dia fonosiny. Ny bitsika koa dia mampiroborobo ny fakan-tsary fakan-tsary maivana an'ny maodely izay manondro fa ilay fitaovana dia hanana fiasan'ny maody AI super night.
Afisy ofisialy Oppo R11 Pro dia nanambara fa mitondra sensor fakan-tsary 48 MP izy
Na dia tsy misy daty voatondro hanombohana ny R11 Pro aza, ny fitaovana dia antenaina hatao ofisialy amin'ny volana ambony, tamin'ny volana martsa. Vao tsy ela akory izay no nahazo mari-pankasitrahana tany Indonezia sy Thailand miaraka amina maodely "CPH1969". Ny F11 Pro dia antenaina hampiditra MediaTek SoC avo lenta miaraka amin'ny 6GB RAM ary 128GB ny toerana fitahirizana anatiny.
Mikasika ny vidiny, vinavinaina fa hamaky fivarotana an-tserasera mitentina 25,000 ropia (~ mihoatra ny 300 euro) any India ny smartphone raha avoaka indray mandeha. Ankoatr'izay, antenaina fa hamely ny tsena izy ity iray amin'ireo elanelam-potoana antonony tsara indrindra miaraka amin'ny sandan'ny vola mety indrindra. Na dia tsy fampitaovana Qualcomm SoC aza, toy ny andiany 600 na 700, ny zava-misy mirehareha amin'ny chipset Mediatek mahery dia hahatonga azy io ho safidy mahaliana hisafidianana ny mpanjifa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Afisy vaovao an'ny Oppo F11 Pro dia manambara ny sensor 48 MP entiny
Xiaomi no mpanjakan'ny mpamokatra nandefa telefaona betsaka indrindra tany India tamin'ny taona 2018